फेरि बैसाख ४ गते नेपाल बन्दकाे यस्तो छ घोषणा – PathivaraOnline
Home > समाचार > फेरि बैसाख ४ गते नेपाल बन्दकाे यस्तो छ घोषणा
फेरि बैसाख ४ गते नेपाल बन्दकाे यस्तो छ घोषणा
admin April 12, 2018 समाचार 0
नकुटा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा कोशी ब्यूरो इन्चार्ज किरण राई सहित ७ जनालाई आज रिहा गनरे लगत्तै पुनः प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । उनीहरुलाई उदयपुरतिर लगिएको छ । गत चैत ५ गते धनकुटाको हिलेबाट गिरफ्तार गरिएका नेताहरुलाई धनकुटाको जिल्ला प्रशासनले समान्य धलौटिमा छोडेको थियो । तर, उदरपुरबाट गएको प्रहरी टोलीले पुनः गिरफ्तार गरेको हो । यसैबीच , गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पुनः गिरफ्तार गरेको दलाल सरकारको चरित्र उदाङगो पारेको भन्दै नेकपाले उक्त घटनाको बिरोध गरेको छ ।
नेकपाका पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज विरहीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर गिरफ्तारीविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेका छन् । कार्यक्रमहरुमा विहीबार (अाज) देखि वैशाख २ गतेसम्म प्रचारप्रसार, जनसंघर्ष, ३ गते मसाल जुलुस र ४ गते पूर्वी कमाण्ड बन्दको घोषणा गरेका छन् । सगरमाथा, जनकपुर, कोशी र मेची बैशाख ४ गते गर्ने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य किरण राईसहित ८ जना नेतालाई पार्टीको बैठक बसिरहेको अवस्थामा चैत ५ गते धनकुटा, हिले बजारबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै नेताहरुलाई निर्दोष सावित गर्दै सामान्य धरौटीमा रिहाइको अादेश दिएको थियो ।
२०७५ सालको वार्षिक राशिफल, कसको भाग्य कस्तो ?
मधेश टुक्रिन कसैले रोक्न सक्दैन, कस्ले रोक्न सक्छ? भनेपछि – भिडियो हेर्नुहाेस>>>
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आक्रमण गर्नेसँग हिसाबकिताब खोज्ने गगन थापाको चेतावनी
बीरगञ्जमा उपचार नपाएर मृत्यु भएकि २० बर्षिया युवतीमा कोरोना पुष्टि